January 8, 2019 - PuraKhabar
January 8, 2019 Purakhabar News
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । १. न्याय पाउने आस मरेपछि कैलालीकी भागरति विकले गरिन आत्महत्या ! कैलाली । अन्ततः कैलालीकी भागरति विकले न्याय नपाएको भन्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । श्रीमानको हत्या भएको र हत्यारा आँखै अघि भएर पनि कारवाही नभएको भन्दै निरन्तर न्यायको लडाइ लड्दै आएकी कैलाली गोदावरी नगरापालिका १४ की भागरति बिकले आत्महत्या गरेकी छिन् । न्याय खोज्दै हाम्रो सम्पर्कमा…
६ वर्षदेखि भारतमा बस्ने हिन्दु, क्रिस्चियन र शिख धर्मावलम्बीले नागरिकता पाउने,मुस्लिम माथि किन अन्याय
नयाँ दिल्ली : भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ । नयाँ कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दु, क्रिस्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छ । मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख छ । नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विशेषलाई पक्षपात गरेकाले यो कानुन विवादमा परेको हो । तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानुनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको उत्तरपूर्वी असमलगायत विभिन्न राज्यमा दशकौँदेखि लाखौँ व्यक्ति विभिन्न छिमेकी…
उपसमितिले माफियामुखी विधेयक पठाएको आरोप : डा. केसी
इलाम : डा. गोविन्द केसीले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्णय हेरेर सत्याग्रह सुरु गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने बताएका छन्। उनी मंगलबार दिउँसो फेरि इलाम आइपुगेका छन्। उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्झौताअनुरूप सदनमा नपठाए बुधबार साँझदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने पत्रकारसँग बताए। उपसमितिले माफियामुखी विधेयक पठाएको आरोप उनले लगाए। उनले यही पुस २५ सम्ममा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। उनी गत मंगलबार सत्याग्रहका लागि इलाम आएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित सबै नेता माफिया बचाउन लागिपरेको आरोपसमेत उनले लगाए। ‘हामी उनीहरूले गर्ने काम गरिरहेका छांै’, उनले भने, ‘उनीहरू…
१३ दिन बिदा थप्दा पनि पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिनु राष्ट्रघाती लम्पसारवाद नभए के हो त ?
January 8, 2019 January 8, 2019 Purakhabar News
गत आइतबार वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतमले आफ्नो फेसबुकमा प्रश्न राखे, ‘१३ दिन सार्वजनिक बिदा थप्दा पनि पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिनु राष्ट्रघाती लम्पसारवाद नभए के हो त ?’ अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले टिप्पणी लेखे, ‘विघटनवादीहरूबाट एकताको पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षा नराखेकै राम्रो ।’ पुस २७ गतेको दिन जब नजिकिँदै आउँछ तब सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सरकारी बिदा दिने कि, नदिने ? भन्ने विषयमा बहस हुन थाल्छ । यो बहस सुरु भएको १२ वर्ष नाघिसकेको छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको दिन पुस २७ गतेलाई मुलुकले राष्ट्रिय एकता…
टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने र उनकी पूर्वपत्नी इशा लामिछानेको विवाद यसपटक सार्वजनिक भयो । रवि लामिछानेसँगको सम्बन्धबारे एक अनलाईनसँग कुराकानी गर्दै पूर्वपत्नी इशाले एक अंशमा भनेकी छिन्, ‘म अमेरिका गएपछि रविजी ति महिलासँग टाढिनुभयो । दुवैजना विवाहित भएकोले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सजिलो पनि थिएन उहाँहरुलाई । म अमेरिका गएलगत्तै ती महिला रविजीसँग रिसाएर नेपाल फर्किनुभएछ । जहान–परिवारवाली प्रतिष्ठित (अहिले ‘प्रतिष्ठित’ हटाएको) व्यक्ति भएको हुनाले म ती महिलाको नाम लिन सक्दिनँ ।’ इशाले नेपालकी प्रतिष्ठित र जहान–परिवारवाली भनेर कसलाई भनेकी हुन् त ? उनले यति सूचनाबाहिर ल्याएपछि मिडिया क्षेत्रमा ति महिला…
वाइडबडी खरिद प्रकरणबारे पर्यटन मन्त्रीको यस्तो जवाफ
काठमाडौं, २३ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरिदमा आफूले कुनैपनि प्रकारको भ्रष्टाचार नगरेको बताएका छन् । संसदीय उपसमितिले भनेजस्तो भ्रष्टाचारमा आफ्नो कहिपनि संलग्नता नरहेको नउले दावी गरे । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया २०७१/७२ बाटै सुरु भएको बताए । उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रक्रिया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको बताए । निगमले किनेका वाइडबडी वोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाकै आधारमा खरिद गरेको उनको दाबी छ ।
काठमाडौं, यौन चाहाना मानवीय गुण नै हो । कतिपय मानिसमा धेरै यौन चाहाना हुन्छ भने कतिपय ब्यक्तिमा कम । अप्राकृतिक स्तरमा सेक्सको अत्याधिक चाहाना हुनुलाई सेक्स एडिक्सन् भन्ने गरिन्छ । तर कतिपय ब्यक्तिमा भने अप्राकृतिकरुपमा नै चाहिने भन्दा बढी यौन आसक्ति रहेको पनि पाइन्छ । जसलाई यौन आशक्ति छ उसलाई थाहा नहुन पनि सक्छ कि अरुलाई यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्विद्यालयले गत गर्ष गरेको अध्यनका क्रममा सेक्सको लतमा रहेका भनिने ब्यक्तिमा यौन चाहाना अत्याधिक हुने गरेको र यो चाहाना सामान्य मानिसमा भन्दा धेरै मात्रामा हुने गरेको…
आज वि.सं. २०७५ पौष २५ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जनवरी ०९ तारिख, आजको मूहुर्त : अन्नप्राशन(पास्नी), अग्निवास(होमादि), डेरा सर्ने, पौष शुक्लपक्षको तृतीया तिथि, दिउँसो १२:१६ बजेसम्म, त्यसपछि चतुर्थी तिथि, धनिष्ठा नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि १२:५३ बजेसम्म, त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र, आजको चन्द्रमा मकर राशिमा, दिउँसो ११:३५ बजेसम्म, त्यसपछि कुम्भ राशिमा, सिद्धि योग, मध्यरात्रीपछि ०४:११ बजेसम्म, त्यसपछि व्यतिपात योग, सुरुमा गर करण दिउँसो १२:१६ बजेसम्म, त्यसपछि वणिज करण मध्यरात्रीपछि ०१:२१ बजेसम्म, अन्तिममा विष्टि (भद्रा) करण, काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२४ बजे आजको राहु काल, यमघण्ट…
२४ पुस, बर्दिया । बर्दियाको गुलरियामा एक महिलाको विभत्स हत्या भएको छ । गुलरिया नगरपालिका वडानम्वर —५ कृष्णसार टोल स्थित आफ्नै घरमा घरेलु हतियारको प्रयोग गरि २४ बर्षकी सुष्मा कुँवरको गए राति हत्या भएको हो । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले मृतककै पति ३५ बर्षीय मोहन बोहोरालाई पक्राउ गरेको छ । स्थानीयका अनुसार घरपरिवारले मृतक कुँवरलाई अत्यन्तै यातना दिने गरेको वताएका छन् । हत्याको आरोपमा पक्राउ भएका बोहोरा नेपाली सेनाको सिपाही पदमा कार्यरत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । उनि हिजो साझँ करिब साढे ९ बजे तिर मात्र…
२४ पुस, बुटवल । बुटवलमा आउँदो शुक्रबार अन्तर मावि दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ । मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमी बुटवल उमहानगर कमिटीले दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चौथौ बटौली ५ हजार मिटर अन्तर मावि छात्र÷छात्रा दौड प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । प्रतियोगिताको तयारी तीब्र बनाइएको एकेडेमीले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । प्रतियोगितामा रूपन्देहीका निजी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन । दौड शुक्रबार बिहान साढे सात बजेदेखि बुटवलको योगिकुटीदेखि ट्राफिकचोकसम्म हुने एकेडेमीका अध्यक्ष विकासजंग बस्नेतले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा प्रथम हुने छात्र/छात्राले १० हजार, द्वितीयले ६ हजार…